ट्रम्प र बाइडेनलाई भारतीय कलाकारले समुद्री बालुवामै उतारे यसरी ! – NepalNewsTv | The Daily Star of Nepal
नयाँदिल्ली : अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा विश्वभर अनेक अड्कलवाजी भइरहेका छन् ।
कसले जित्ला ? वा कसले जित्नुपर्छ ? भन्नेबारे धेरै आंकलन र बहस पनि भइरहेका छन् । भारतका केही स्थानमा त डोनल्ड ट्रम्पको र कमला ह्यारिसको नाममा पूजा आराधना नै गरियो ।
भारतकै पुरी समुद्र किनारमा एक प्रतिष्ठित ‘स्यान्ड आर्टिस्ट’ सुदर्शन पटनायकले ट्रम्प र बाइडेनको रोचक चित्र कोरेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरे । चुनावी परीणामको अन्योलता दर्शाउने उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला भाइरल बनेको छ ।
सुदर्शनले उक्त तस्बिर इन्स्टाग्राम, ट्वीटर र फेसबुकमा समेत शेयर गरेका छन् । अमेरिकामा मतगणनाको बीच विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन र तनाब भइरहँदा भारतीय कलाकार सुदर्शनले त्यसलाई सुन्दर तरिकाले चित्रमा उतारेका हुन् ।
चित्रमा अमेरिकी झण्डासहित ट्रम्प र बाइडेनलाई उनले आमने सामने बनाएका छन् । एक तस्बिरमा दुबैजनाको बीच उनले ठूलो प्रश्नबाचक चिन्ह बनाएका छन् भने अर्को एक तस्बिरमा दुबैको बीचमा पर्ने गरी शुभकामना लेखेका छन् ।
नोभेम्बर ३ मा सुरु अमेरिकी निर्वाचनको परीणाम अझै आइसकेको छैन । यसपटक हुलाकबाट पनि मतदान भएकाले परीणाम आउन केही ढिलो भएको बताइएको छ । साथै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मतदाता यस पटकको चुनावमा सहभागी छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २०७७, ५ मंसिर शुक्रबार २०७७, ५ मंसिर शुक्रबार 126 Viewed